အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ကန့်ကွက် သပိတ်မှောက်နေသော ကျောင်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာများ အစည်းအရုံး၏ တိုက်တွန်းပန်ကြားချက်။	Posted on January 31, 2015	by bmta05 အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ကန့်ကွက် သပိတ်မှောက်နေသော ကျောင်းသားများ၏ တောင်းဆို ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာများ အစည်းအရုံး၏ တိုက်တွန်း ပန်ကြားချက်။
This entry was posted in ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်. Bookmark the permalink.	← “ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာမများ အစည်းအရုံး၏ ကမ္ဘာ့ ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားတွင် ထုတ်ပြန်သော တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်”